Yenziwe ngani iminyango yezokuphepha? - TSINFA
Ukuze ube namandla okulwa nokweba, umnyango wokulwa nokweba kumele udlule kwinqubo yokukhiqiza eyinkimbinkimbi futhi eqinile.
Ipuleti 2.Door embossing
3.Door Uhlaka Embossing
Izingxenye ze-7.Welding ezincane
8.Ukwenza izinto ngocansi
Izinqubo eziyi-11 zokunemba ziyadingeka:
1. Ukusika ipuleti: inqubo yokusika iyisixhumanisi esibaluleke kakhulu ekukhiqizeni iminyango. Ijubane lokusika nekhwalithi kuthinta ngqo inqubekela phambili yokukhiqiza nekhwalithi yeminyango yokuphepha. Ekukhiqizweni kwangempela, kubalulekile ukukhetha umshini wokugunda ofanele ngokusho kobukhulu bepuleti, ukuze ugweme ukusika okungaphezulu kokuqina. Intambo engaphezulu yomshini wokugunda igxilile kumnikazi wamathuluzi, kuthi i-blade engezansi imiswe ebhentshini lomsebenzi. Ngaphambi kokungena emshinini wokugunda, i-engeli yepuleti idinga ukulungiswa futhi ilungiswe ngomshini ukunciphisa ukuhlanekezelwa kwepuleti, ukuze kutholakale umsebenzi wokusebenza osezingeni eliphakeme.
2. Umnyango wepuleti we-embossing: ngokusho kwephethini eklanyelwe ukwenziwa, i-die yenziwa, ne-tonnage enkulu, phezulu kwetafula elincane kanye nokucacisa okuphezulu kwemishayo emithathu nekholomu eyisishiyagalombiliumshini wokubacindezela we-hydraulicisetshenziselwa ukufaka ngokushesha ipuleti lensimbi elibunjiwe elibandayo noma ipuleti lensimbi. Ngesikhathi sokugcizelela, iringi onqenqemeni isetshenziselwa ukucindezela emaphethelweni epuleti, bese iphethini oyifunayo itholakala ngokucindezela ama-cores wokufa aphezulu naphansi. Ngokushintsha umnyombo wesikhunta, umshini ungasetshenziswa ukucindezela amaphethini ahlukahlukene, futhi umphumela we-embossing muhle, iphethini icacile futhi umqondo wezinhlangothi ezintathu unamandla. Ingcindezi yokusebenza, isivinini sokucindezela kanye nokushaywa kogongolo abathathu bekholomu eyisishiyagalombili yomshini wokubacindezela kungalungiswa ngaphakathi kwebanga lepharamitha elicacisiwe ngokuya ngezidingo zenqubo. Umshini unamandla ezimele womshini nohlelo lukagesi, futhi usebenzisa inkinobho yokulawula eyodwa, engakwazi ukubona izindlela ezintathu zokusebenza: ibhukwana, i-semi-othomathikhi ne-othomathikhi. Ingakwazi ukubona izindlela ezimbili zokucindezela: ingcindezi engaguquguquki nobubanzi obungaguquki. Ukusebenza kulula futhi kulula, futhi umshini wonga amandla futhi usebenza kahle.
3. Ukufakwa embosseni komnyango: sebenzisa uhlobo lozimele lokucindezela u-hydraulic ngomnyango wesikhunta se-door embossing ukuze ucindezele ukuthola iphethini edingekayo. Umshini wokugcizelela uhlaka lomnyango usebenzisa isakhiwo esivulekile, esonga imali futhi esisebenzayo. Isilawuli se-hydraulic sisebenzisa uhlelo oluhlanganisiwe lwe-cartridge valve ukunciphisa iphuzu lamazolo. Inesenzo esithembekile, impilo ende yokusebenza, amandla amahle nokuqina, nokubukeka okuhle.
4.Ukushaya isibhakela: ngezibhakela nge-25t, 35t nge-punch press. Ngemuva kokuthi ipuleti lilungiswe ku-punch, inqubo yokushaya isibhobo sikakhiye omkhulu, uhlangothi lwekhiye, isibambo somgodi, imbobo yomnyango, imbobo yohlangothi ohlangothini kanye nomgodi wamehlo wekati kuyaphothulwa ukuze kuqinisekiswe isikhundla esinembile nosayizi onembile.
5. Ukwehlukanisa izinto: ngokwezidingo zomklamo wemikhiqizo ehlukile yokulwa nokweba, ipuleti libekwa kumshini othomathikhi wokulwa nokweba umnyango wokubeka isikhundla esinqunyelwe kusengaphambili somnyango wesango lokulwa nokweba.
6. Ukugoba: beka ubuso bomnyango nohlaka lomnyango kubhande lokusebenzela lomshini wokubhoboza umfutholuketshezi, cindezela ngepuleti lokucindezela, khetha i-notch eguqa, setha unhlangothi, bese uqedela inqubo yokugoba kobuso bomnyango nohlaka lomnyango ngemuva kwezikhathi eziningana zokuphindaphinda .
7. Ukushisela izingxenye ezincane: inqubo yokushisela kagesi yenziwa ngezingxenye ezincane emnyango wokulwa nokweba okudinga ukusethwa kabusha ekukhiqizweni kokuqala, kufaka phakathi ipuleti elingisiwe, ipuleti lokufaka uphawu elingaphezulu nelingaphansi, ibhokisi lokukhiya eliyinhloko nezinye izingxenye.
8. I-Phosphating: ipuleti lensimbi lifakwa kwisisombululo se-pickling ne-phosphating. Ngemuva kokugcotshwa, ukugcotshwa, ukucwiliswa, ukufakwa kwe-phosphating nezinye izinqubo, kwakheka ungqimba lwefosifing ebusweni bomnyango wokulwa nokweba, ukuze kuqinisekiswe ukuthi ipuleti ngeke ligqwale ngaphambi kokufafaza, ukuze kusizakale ukufafazwa kwepulasitiki.
9. Ukunamathisela: gcwalisa igebe phakathi kwamapaneli omnyango wangaphambili nangasemuva ngephepha lezinyosi, ukotini ongacimi umlilo nezinye izinto zokugcwalisa, bese usebenzisa umshini wokucindezela oshisayo onhlobonhlobo ukunamathisela ipaneli lomnyango ukuze ulwakheke.
10. Ukufafaza kwepulasitiki: kusetshenziswa i-voltage ephezulu kagesi we-static, i-polyester, i-epoxy nokunye ukumbozwa kwe-polymer kufuthwa ebusweni bomnyango wokulwa nokweba ngemuva kwe-phosphating ukwakha ungqimba lwengqimba evikela ukugqwala.
11. Ukuphrinta kokudluliswa: fafaza “impushana yokudlulisa” ekhethekile ebusweni bomnyango wokuphepha, iglu kanye nephepha lokudlulisa elinamathiselwe. Ngemuva kwemizuzu engama-20 ngo-165 ℃, kwakheka ungqimba oluqinile, olungavumi ukugqwala, oluyinkimbinkimbi futhi oluhle.
12. Umbala wokubhaka: ilenga umnyango wokulwa nokweba bese uwuthumela kuhhavini ngokubhaka okushisa okushisa okuphezulu, ukuze kulungiswe umphumela wokufafaza nokudlulisa, futhi wandise ikhono lokudamba lokulwa nobuso bomnyango wokulwa nokweba.
13. Ukuhlanza: umnyango wokulwa nokweba uzohlanzwa kahle, kuthi izinsalela zenqubo edlule zisuswe, bese umkhiqizo upakishwa ngokusemthethweni bese uhanjiswa.
Njengamanje, imakethe yeminyango yezokuphepha isesikhathini soguquko "kusuka ebuningini kuye kwikhwalithi". Ngokombono omkhulu, ngaphansi kokugqugquzela ukusetshenziswa kokuthuthuka kanye nokufudukela emadolobheni, ithemba lemakethe lomnyango wokulwa nokweba libanzi. Ngokombono omncane, ngokuthuthuka okuqhubekayo kokuqwashisa kwabantu ngokuphepha kanye nokufunwa kwezokuphepha, imikhiqizo emihle futhi esezingeni eliphakeme yokulwa nokweba izovela ngokugqamile futhi ilethe "inzuzo ethe xaxa" kumabhizinisi okukhiqiza. Njengesisekelo sokukhiqiza, umugqa wokulahleka kokukhiqizwa kwanamuhla nobungcweti weminyango elwa nokweba uzoba "yizidingo" zala mabhizinisi okukhiqiza.